Heshiiskii magaha ay ku kala qaadanyeen beelihii heshiisiinta uga socotay degmada Rako oo lasoo gabagabeeyay. – Radio Daljir
Rako, Apr 08 -Waxaa degmada Rako ee gobolka Karkaar lagu soo gunaanaday maanta heshiisiin laga dhexwaday laba beelood oo walaalo ah oo horay dagaallo ay dad badani ku dhinteen ku dhexmaray miyga degmada Rakko.
Gogosha lagu soo afjarayay colaadda oo ahaa kii labaad oo ay beelaha Cali Saleebaan iyo Muuse Saleebaan ay yeeshaan ayaa waxaa kasoo shaqeeyay gudiyo issimo iyo nabaddoono ka kooban oo ka yimid gobolada kale duwan ee Puntland.
Nabadoon C/qaadir Axmed Ibaarhim Xarago oo ergooyinka nabadaynta ku howlanayd ka mid ah ayaa waxaa uu sheegay isfahamka labada beelood ay ka gaareen dhibihii dhexmaray inay ka midyihiin diyooyinka 30-qof oo dagaalada ku dhintay, dhaawacyada dagaalada ku dhaawacmay in qolo kastaa ay qaybtooda dhayaan.
Wasiirka amniga ee dowladda Puntland iyo xubno kale oo ururada bulshada rayidka Puntland ka mid ah ayaa goob joog ka ahaa madashii colaadda lagu soo afjarayay.
beeldaaje Ismaaciil Beeldaaje Yaasin oo ka mid ah hogaamiye dhaqameedka Puntland ayaa isaguna dhankiisa soo dhoweeyay heshiiska laga gaaray colaadda miyiga degmada Rakko.